OPDO claiming to be OLF was the main strategy of TPLF. Yes, by bringing the OPDO to power, TPLF | Kichuu
OPDO claiming to be OLF was the main strategy of TPLF. Yes, by bringing the OPDO to power, TPLF aimed at extending their stay on the colonial power longer. Their dream of watering down the Oromo people’s boiling National struggle appears to be realized, not by the TPLF, no no by the sellout Oromos themselves. But how far TPLF will succeed – remains to be a game – and articulated drama!!!!! Remember, when the hyenas start to fight among each other, the innocent and the real OLF need to retreat back to its original kaayyoo. So do not be a fool and surrender your total safety mechanisms
OPDOn Dhaabilee Oromoo hunda Amate Oromoo abbaa biyya goochu dhifte akkuma waga 27 Tigireti nu gugurte nu ajeesisa bate amoo Amharati nu gugurtte Garbuma Habasha jalati nu garbonfachisuf deemu. Kara birra amoo:- Warii Ala Galana soban Araarsu jeene egne soban Lama Magarsa akka ABO irrati dulu goochun isaan yakka, Oromoon kana beeku qaba.
Namoon biyya alati Galan Lammaa Magrsa kara hin tane gorsa laman guyya tokko keessati 360 digirii jijirame ummata Oromoo fi ABO irrati lola labsun isaa bu’aa Harcatoota Qabsoo Diaspora irra galte ta’uu isaa media OMN irrati iyuu dubatame jira kun amoo wara galee hundafi garii miti
Tokko ta’uu maliif hin dandeenyu Horma irra ilee habaranu.
OPDOn Dhaabilee Oromoo hunda Amate Oromoo abbaa biyya goochu dhifte akkuma waga 27 Tigireti nu gugurte nu ajeesisa bate amoo Amharati nu gugurtte Garbuma Habasha jalati nu garbonfachisuf deemu. Kara birra amoo:- Warii Ala Galana soban Arararsu jeene egne soban Lama Magarsa akka ABO irrati dulu goochun isaan yakka Oromoon kana beeku qaba. TPLF erga Dr. Aragawi Berhe simate lamman maliif ABO jiba?
Namoon biyya alati Galan Lammaa Magarsa kara hin tane gorsa laman guyya tokko keessati 360 digirii jijirame ummata Oromoo fi ABO irrati lola labsun isaa bu’aa Harcatoota Qabsoo Diaspora irra galte ta’uu isaa media OMN irrati iyuu dubatame jira kun amoo wara galee hundafi garii miti
Foramiin Bulchiinsa Tigraay (Tigray Governance Forum) kan guyyaa lamaaf turu yeroo lammaffaaf Maqalee Galma Plaaneet Hoteel keessatti geggeeffamuu eegaleera. Baatii tokko dura mariin mata dureedhuma wal fakkaataa kanaan Finfinnee Galma Harmony Hotel keessatti akka geggeeffamee ture ni yaadatama. Foramii yeroo lammaaffaaf amma Malqaleetti geggeeffamaa jiru irratti gameeyyiin qabsoo sabichaa waraqaa qorannoo dhiheessuuf tartiiba qabatanii jiru. Dhaabonni siyaasaa saba kana keessaa bahan (TPLF, ARENA fi Dhaabbanni Demokraasummaa Atoomsa Tigraay kan Dr. Aragaawii Barheetiin hogganamu) hirmaataa jiru. Foramii kana irrtti paartiilee mormituu biyyattii keessaa EDEPA bakka bu’uun Obbo Lidetu Ayalew achi jira. Paartiilee siyaasaa biyyattii keessaa kan Lidetuu kun qofti filamee maaliif akka afeerame ammatti ifaa miti.
OPDOn dhihootti maqaa, alaabaa fi falaasama siyaasa ishee akka jijjiirrattu himtee jirti. Garuu fakkeessii fi gowwoomsaaf ofjijjiiruun,jijjiirama bu’uuraa sabni oromoo fedhuu fi hawwu sana fiduu hin danda’u.
Bofi ogguu dulloomu, gogaasaa isa dulloome of irraa gateetu gogaa haaraan muuxateetu Bofa haaraa ta’ee baha. Garuu Bofummaansaa summiinsaa durii sun isuma durii sana tasa hin jijjiiramu.
OPDOnis si’a 99 ofjijjiirte illee hamma aantumma saba oromoof hin qabaannetti, dantaa, nageenyaa, mirgaa fi bilisummaa saba oromoo hin kabachiisnetti yoo gowwoomsaaf filmaataaf ofqopheessuuf ta’e male faayidaan ummata oromoof fiddu tokkolle hin jiru.
OPDOn maqaashee jijjirtu illee kaayyoon ishee isuma kaleessaa ti. Ummata Oromoo sirna cunqursaa jalatti hiitee qabuu dha. Halagaaf ulee ykn riqicha taatee lammiishee miidhuu dha.
OPDOn maqaa jijjiirrattus hamma Gaafa kallacha ummata oromoo ABO waliin karaa nagaan waliigaltee saba oromoof hin hojjennetti tasa gonkumaa dhaaba ummata oromoo ta’uu hin dandeessu.
OPDO Jechuun condom/Sombaa TPLF waggaa 27ttiif jechuudha;ammaa OPDO TPLF irraa garaa Nafxanyaa /Ityoophiyaa Ahmaaraa Itti hirumatee jirti.